Regedza uye bvisa zvachose yako WhatsApp account | IPhone nhau
Maitiro ekudzima zvachose uye kusaita yako WhatsApp account
Juan Colilla | | IPhone nhau, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Zvichida wakambozviwana iwe uri mumamiriro ezvinhu kuti chero chikonzero iwe wachinja yako nhamba yefoni kana kuti warasa / ukaisiya, mune iwo mamiriro ezvinhu zvinoitwa neanoshanda anosunungura iyo nhamba uye ipe mumwe munhu, munhu anozoshamisika kana achiisa yakakurumbira meseji yekushandisa mameseji WhatsApp kana iyo yapfuura yakanganwa kudzima account yake (kuve nekwanisi kuakaundi yeakaundi yapfuura).
Nhoroondo dzeWhatsApp dzakabatana kunhamba yefoni, kana kumunhu, kana kuemail kana kuchinhu chaicho, izvi zvinopa bhenefiti rakakura pakusimbisa kushanda kweakaunti neSMS uye kukanganwa nezvekunyoreswa uye mapassword nevamwe, asi zvinorevawo njodzi inogona kunge yakavanzika sezvo chero munhu ane iyo nhamba yefoni achigona kuwana rese data rakabatanidzwa kwariri.
Kudzivirira munhu kuwana WhatsApp yako nekuwana yako nhamba yefoni, nhasi tiri kuzokuratidza sei dzima uye bvisa zvachose yako WhatsApp account mumatanho mashoma mashoma.
1 Zvinorevei kudzima yako WhatsApp account?
3 Matanho ekutevera
Zvinorevei kudzima yako WhatsApp account?
Kubatana pakati penhamba yako yefoni uye neako data reWhatsApp (mufananidzo pikicha, chinzvimbo, chats, multimedia mafaera ...) zvichabviswa.
Yako nzira yekubhadhara yakanyoreswa ichabviswa kubva kumaseva eWhatsApp.
Iwo makopi enhaurwa dzako akachengetwa pane ese ako iOS kifaa uye iCloud achadzimwa.
Iyo nhamba ichave yemahara kune nyowani WhatsApp kunyoresa.
Inokurudzirwa negadziriro yeparutivi wako iOS mudziyo munharaunda Pane yako PC kana MAC, kudzima yako WhatsApp account kuchabvisa zvakare otomatiki backup yemachats muICloud uye kana tikazomboda kumutsidzira account yedu uye chengeta mafaera edu, isu tichafanirwa kuisa iro rekushandisa backup.
Isu tinowana iyo WhatsApp app yakaiswa pane yedu iOS chishandiso uye vhura iyo (inoshanda pane Android).
Isu tinoenda kune iyo Zvikamu chikamu mukati mekushandisa uye tinopinda iyo "Akaundi" chikamu.
Muchikamu che "Akaundi", tinya pane "Delete my account" sarudzo.
Isu tinopinda nhamba yedu yefoni kusimbisa kubviswa uye kana chapera tinodzima iko kunyorera kubva kuchinhu chedu (kunyatso bvisa rese data rakachengetwa imomo).
Nenhanho idzi dziri nyore account yedu inenge yabviswa zvinobudirira uye anotevera munhu anowana yako ikozvino nhamba yefoni anokwanisa kunyoresa seye nyowani WhatsApp mushandisi, pasina kuchengeta chero hurukuro, pikicha kana mhando yemunhu data yemuridzi wayo wekare.
Aya mamiriro anoshanda kune wegaNdokunge, kana chero nguva isu tichida kumutsidzira account yedu, tichazviita sekunge taive vashandisi vatsva, isu tinofanirwa kunyoresa nenhamba yedu yefoni uye kumisikidza iyo account neSMS kuti titange patsva kana kudzoreredza data rese kubva ku backup yapfuura .
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima zvachose uye kusaita yako WhatsApp account
Chaizvoizvo, izvi ndizvo ZVINOFANIRA kuti iyo WhatsApp account yakanzurwa sei zvachose ...
Dambudziko nderekuti zvino mukuita, idzi mhombwe dzinoita zvavanoda ... uye pakarepo kubva pabheti, mavhiki mushure mekudzima account, kamwe kamwe shamwari dzako dzinokuudza kuti unoonekwa muapp zvakare. Unozvitarisa, uye zvirokwazvo ... waonekazve ... sekunge vadzorera "backup" usati waburitswa ....
Zvakanditorera zvakawanda kuti pakupedzisira ndipinde kuzvikumbiro zvangu zvekuzvinyora, izvo zvavakaita mushure memavhiki akati wandei nemaemail mazhinji anotyisidzira magweta, iyo Dziviriro Dhata, nezvimwe. Havana kumbobvira vandipindura, hapana ... asi pakupedzisira vakapedzisira vandigumisa zvachose (zvinofungidzirwa, asi zvirokwazvo ... ndiani anoziva).
Adriana vazquez akadaro
Kana mumwe munhu aine iPhone uye akati ivo vanofanirwa kukanzura account yavo, vanogona here kuramba vachiwedzera yavo profile mufananidzo uye kana iwe ukavafonera, vanokupa here ringtone?
Pindura Adriana vazquez
WhatsApp inovandudzwa pamwe nekuratidzwa kwekubatanidza uye nezvimwe zvakawanda
Isa iyo Nintendo DS emulator pane yako iPhone pasina Jailbreak [NDS4iOS]